Guntooyinkan qarsoon ma ahan kuwo aad uga dambeeya quruxda iyo sixirka, ka badan magaalooyinka sida Paris iyo Berlin.
Intaa waxaa dheer, ah sooyaalka ugu caansan in Germany, kaniisada weyn ee Cologne waa bilaash in la booqdo. Qaab dhismeedkeeda Gothic, daaqadaha muraayadaha rinjiga ah, aragtiyada webiga waa kuwo kacsan. Hadaad jeceshahay fanka, markaa Cologne ayaa leh matxafyada waaweyn ama farshaxanka waddooyinka xiisaha leh gudaha Ehrenfeld. Goobtani waa sinta iyo qaybta isbadalka ah ee Cologne, tag-ka meesha kafeega iyo guridda.
Magaaladu waxay kaloo hoy u tahay qalcado iyo beero cajaa’ib leh oo si bilaash ah loo booqan karo, iyo haddii aad rabto inaad kor ugu kacdo aragtida astaamaha, markaa khidmadda gelitaanka munaaradda ayaa ka yar 5 euros. Ikhtiyaar kale oo weyn oo lagu sahaminayo magaalada ayaa ah ku biirista safar socod bilaash ah oo aad la kulanto socotada kale ama aad ballansatid a Cesky Krumlov magaalada gaarka loo leeyahay ee socdaalka ku maraya burcadda. Sidan ayaad ku ogaan kartaa sirta magaalada, halyeeyada, iyo talooyin si aad safar layaableh ugu aaddid dhul sheeko xariir ah.
Eger wuxuu ku habboon yahay isbuuca nasashada ee Budapest. Xulashada inta u dhaxeysa safar maalinle ah ama biririf Budapest ah adigaa iska leh, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad ugu yaraan usbuuc dhammaad ah ku qaadato magaaladan xiisaha badan.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawinno inaad qorsheyso fasaxaaga meelaha ugu jaban ee Yurub tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "7 Meelaha ugu Awooda Badan ee Lagu Safri Karo Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
safarka la awoodi karo miisaaniyad cheaptravel jamhuuriyadda TareenTravelBelgium TareenTravelHungary travelfrance travelgermany